Jereo ny valan-javaboary voajanahary ao amin'ny Dunas de Liencres | Vaovao momba ny dia
El Dunas de Liencres Natural Park dia toerana voajanahary any Cantabria, eo amin'ny faritra amoron'ny renirano Pas. Raha hitsidika an'ity vondrom-piarahamonina ity ianao dia mety tsy mitady tanàna hijanonana fotsiny fa koa toerana voajanahary tsara tarehy. Cantabria dia manolotra antsika fisarihana maro, manomboka amin'ny lava-bato Altamira ka hatrany amin'ny tanàna toa an'i Santander na Castro Urdiales. Ho fanampin'izany, manolotra antsika faritra voajanahary voaaro misy hatsarana lehibe toy ny Dunas de Liencres Natural Park.
Este park voajanahary dia nambara tamin'ny taona valopolo, lasa faritra arovana ao Cantabria. Hizaha izay hitantsika amin'ity Park voajanahary tsara tarehy any Dunes of Liencres ity isika. Ity faritra ity dia miorina ao an-tanànan'i Piélagos eo am-bavan'ny ony ary manolotra morontsiraka maro ho antsika.
1 Tantaran'ny Valan-javaboahary Dunas de Liencres
2 Serivisy amin'ny faritra
3 Valan-javaboary voajanahary
Tantaran'ny Valan-javaboahary Dunas de Liencres
Ity habaka voajanahary ity dia nambara ho valan-javaboary voaaro tamin'ny Desambra 1986. Ny namaritra fa faritra arovana io dia ny rafitra dune. Nampidirina tao amin'ny Tambajotran'ireo faritra voajanahary voaaro any Cantabria. Tamin'ny 2004 dia nanatevin-daharana ny Places of Community Importance an'ny faritra biogeographic Atlantika ihany koa. Anisan'izany ny valan-javaboary iray manontolo ary mipaka hatrany amin'ny hadilan'ny Pas.
Serivisy amin'ny faritra
Raha hitsidika an'ity valan-javaboary voajanahary ity isika dia afaka mahita serivisy isan-karazany izay mety tena ilaina raha ny fahitana ny habaka. Ny seranam-piaramanidina Santander dia latsaky ny zato kilometatra miala ary ny gara akaiky indrindra dia Mogro, latsaky ny dimampolo kilometatra. Ao amin'ny tanànan'i Piélagos dia misy fijanonana taxi sy bus koa. Amin'ny manodidina dia misy toerana samihafa ary koa toerana fijanonan'ny fiara akaikin'ny ala kesika ary koa ny dongom-pasika, noho izany dia tsara ny mandeha fiara. Ao amin'ilay faritra dia misy zotra misy zotra misy takelaka misy soratra ary koa takelaka fandikana. Toerana mety ho an'ny fianakaviana izy io ary matetika toerana mangina tsy misy fidiranana be loatra. Mila mitandrina fotsiny ianao amin'ny fikarakarana ny habaka nefa tsy manadino fa toerana voaaro izy io.
Amin'ny faritra amin'ny valan-javaboary voajanahary dia afaka mankafy habaka maromaro ianao. Azonao atao ny mametraka ny fiaranao amin'ny faritra akaikin'ny ala kesika. Eto amin'ity toerana ity dia misy a lalana kely mankany amin'ny dongom-pasika sy amoron-dranomasina. Misy faritra fitsangantsanganana ka toerana mety indrindra raha te hiala sasatra sy hihinana ankohonana isika satria misy latabatra vitsivitsy. Afaka mandany iray andro any amin'ny ala kesika isika na midina amin'ny faritra amoron-dranomasina. Na izany aza, dia toerana mahafinaritra be izao ny mandeha an-kalamanjana amin'ny toerana milamina. Izy io dia iray amin'ireo faritra voajanahary azo ankafizina malalaka, mitandrina hatrany mba tsy handoto na hanimba ny toerana. Fianakaviana maro no manapa-kevitra ny handany ny andro any amin'ny faritry ny ala kesika izay manome alokaloka sy toerana mangina hisakafoanana na hialana sasatra mihitsy aza.
Misy fiantsonan'ny fiara hafa any amin'ny faritra amoron-dranomasina. Ity toerana ity dia mety hanana toerana vao maraina fa rehefa mandeha ny andro amin'ny vanim-potoana avo dia feno izany, satria misy fianakaviana maro tonga any an-toerana hankafy ny torapasika. Misy morontsiraka roa azo tsidihina. Ny an'ny Canavalle dia ny morontsiraka eo ankavanana ary miavaka amin'ny rivotra be ary mivonto koa. Toerana iraisana ho an'ny mpanao surf izy io ary faritra ho an'ny atleta na dia tsy dia atolotra ho an'ny fianakaviana loatra aza izy io noho ny onja. Ny faritra fasika hafa dia Valdearenas, toerana fasika volamena tsara misy onja vitsivitsy. Amin'ity faritra ity dia mila mitady lohandohany izay ahafahan'ny ankizy mandro soa aman-tsara ianao satria toa manana onja matetika ny rano. Mba hahitana ny faritra dia misy ny diany mamaky ny dongona sy habaka voajanahary hahafahantsika mandeha avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa.
La faritra roa ny dune manana faritra roa. Ny iray amin'izy ireo dia ny ampahany amin'ireo dongom-pasika finday izay nifindra moramora nankany anaty tany. Ny fanitarana azy ireo dia nijanona tamin'ny fampiasana ala kesika izay nanamboatra azy ireo tao amin'io faritra io. Amin'izany fomba izany, ny dune finday dia azo ekena mora foana ary tsy nihetsika lavitra noho ny fihetsiky ny rivotra, zavatra iray izay mety hahatonga azy hanjavona rehefa mandeha ny fotoana. Etsy ankilany, manana ny faritra amin'ireo dongom-boaloboka izay misy zavamaniry ianao ary mijanona ao amin'ny faritra akaikin'ny morontsiraka. Azo atao ny mitsidika azy roa ary matetika dia toerana mahafinaritra ny ankizy kely izany. Avy amin'ny dongona dia misy fomba fijery mahafinaritra momba ny faritra amoron-dranomasina. Ny fomba fijerin'ny morontsirak'ireo morontsiraka roa dia manome antsika faritra mety handeha sy haka sary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Liencres Dunes Natural Park
Masai Mara, toerana fitsidihana safari
Timisoara, miaraka amina firavaka romainina